HARTMANN ဖြစ်စဉ်ကိုဖွင့်လှစ်မနိုင်အဘယ်ကြောင့် - မည်သို့ဖြစ်စေ - 2019
Addressing « ArtMoney နိုင်မရပွင့်လင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ် "
တစ်ခါတစ်ရံလူတွေကြောင့်ကြီးမားတဲ့ဖိုင်အရွယ်အစားကက e-mail ဖြင့်တစ်ဦးကို PDF-စာရွက်စာတမ်းပေးပို့ဖို့အဘယ်မှာရှိအရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့အခွအေနေသို့ရောကျနှင့်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ကွက်။ ရိုးရှင်းတဲ့လမ်းထွက်ရှိပါသည် - ထိုသို့သောတစ်ခု extension ကိုမှတ္ထုချုံ့ဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်သည့်အစီအစဉ်၏အားသာချက်ယူသင့်ပါတယ်။ ထိုသို့သောဖြစ်နိုင်နှင့်ဤဆောင်းပါးထဲမှာအသေးစိတ်ဆွေးနွေးကြမည်သည့်အဆင့်မြင့် PDF ကိုကွန်ပရက်ဆာ, ဖြစ်ပါတယ်။
PDF documents တွေ Compress
အဆင့်မြင့် PDF ကိုကွန်ပငျသညျ PDF files တွေကို၏အရွယ်အစားလျှော့ချဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဤတွင်အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်နှင့်အရောင်စာရွက်စာတမ်းများများအတွက်သီးခြား setting များကိုရှိပါတယ်။ အရောင်အကြောင်းအရာနှင့်လျှော့ချရေးကိုသက်ဝင်, advansed PDF ကိုကွန်ပရက်ဆာအလှည့်၌, ဖိုင်အရွယ်အစားလျှော့ချတံ့သော, image ကိုရိုးရှင်းလွယ်ကူတာနဲ့အရောင်အတိမ်အနက်ကို၏လျှော့ချရေးတို့အတွက်အဆင့်မြင့် setting များကိုပူဇော်ပါလိမ့်မယ်။ ပိုမိုထိရောက်သောဖိအားများအတွက်စာရွက်စာတမ်းလျှော့ချခြင်းကိုခံရလတံ့သောအားဖြင့်ရာခိုင်နှုန်းသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဒါဟာငယ်များကပိုဆိုးနောက်ဆုံးရညျအသှေးရှိလိမ့်မည်, ကြောင်းကိုသတိရသင့်ပါတယ်။
အဆင့်မြင့် PDF ကိုကွန်ပသင်တဦးတည်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုဓာတ်ပုံများကိုသတ်မှတ်နှင့် PDF-File ကိုမှသူတို့ကိုပြောင်းလဲခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒါဟာတစ်ခုတည်းသောစာရွက်စာတမ်းအဖြစ်ကဤပုံရိပ်တွေစေရန်တတ်နိုင်သမျှဖြစ်ပြီး, အသီးအသီးရုပ်ပုံသီးခြား PDF ဖိုင်သို့ကူးပြောင်း။ သင်တို့သည်လည်းဤကဲ့သို့သောဖန်ဆင်းခြင်းရက်စွဲနှင့် / သို့မဟုတ်တည်းဖြတ်ခြင်း, အရွယ်အစားနှင့်နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. အဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသော parameters တွေကိုပေါ်တွင်ရုပ်တုဆင်းတုများ၏အမိန့်ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်မှာစာရွက်အရွယ်အစားနှင့်အကျယ်နယ်နိမိတ်အသုံးပြုသူအချက်များ။
သိရန်ကောင်းသော! တစ်ဦးကို PDF-File သို့ပုံရိပ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့အတွက်ကို select ရန်သေချာစေပါ « Image ကို-to-PDF ဖိုင်ရယူရန် Converter » အပိုင်း « Mode ကို».
အဆင့်မြင့် PDF ကိုကွန်ပရက်ဆာတစ်ဦးကျုံ့ခြင်းဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်, တစ်ခုတည်းသို့, ဤ PDF files တွေကိုပိုပြီး compose ဖို့အသုံးပြုသူပေးထားပါတယ်။ ထို့ကြောင့်သင်က, e-mail ဖြင့်နောက်ပိုင်းတွင်ကိုစလှေတျခံရဖို့စာရွက်စာတမ်းများမဆိုအရေအတွက်ကပေါင်းစပ်သို့မဟုတ်ဖြုတ်မီဒီယာက upload တင်လို့ရပါတယ်။
သိရန်ကောင်းသော! ဤအလုပ်ရပ်များ mode ကိုသက်ဝင်စေရန်လိုအပ်ပါတယ်ဖျော်ဖြေဖို့ « PDF ကိုပေါင်းစပ်» အပိုင်း « Mode ကို».
ထောကျပံ့ profile များကို
အဆင့်မြင့် PDF ကိုကွန်ပ settings အမျိုးမျိုးနှင့်အတူပရိုဖိုင်း၏ဖန်တီးမှုအဘို့အထောက်ခံမှုနှင့်အတူအများအပြားအသုံးပြုသူများအနေဖြင့်တစ်ပြိုင်နက်တည်းသုံးနိုင်ပါတယ်။ ဒီ function ကိုသင်လျင်မြန်စွာလိုအပ်သောပရိုဂရမျ parameters တွေကိုအကြားအကူးအပြောင်းခွင့်ပြုတဲ့ template ကိုဖန်တီးရန်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
PDF documents တွေချုံ့နိုင်စွမ်း;
မျိုးစုံ profile များကိုဖန်တီးနိုင်စွမ်း။
အချို့အင်္ဂါရပ်ကတော့ paid version ကိုသာရရှိနိုင်ပါသည်။
အဆင့်မြင့် PDF ကိုကွန်ပမှတပါး, ကပုံရိပ်တွေကနေ PDF ကိုဖန်တီးနိုင်စွမ်းကိုထောက်ပံ့ပေးခြင်းနှင့်တဦးတည်းသို့ဖိုင်များကိုအုပ်စုတစ်ခုပေါင်းစပ်ပြီး, PDF ကို-စာရွက်စာတမ်းများ၏ချုံ့အဘို့ကြီးစွာသောအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်သင်မျိုးစုံအသုံးပြုသူများအနေဖြင့်၎င်း၏ဖြစ်နိုင်အသုံးပြုမှုရာတွေနဲ့ကွဲပြားခြားနားသောအပြင်အဆင်များနှင့်အတူ profile များကိုဖန်တီးအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။
အဆင့်မြင့် PDF ကိုကွန်ပရက်ဆာအစမ်းဗားရှင်းကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်
အဆင့်မြင့် JPEG, ကွန်ပ အခမဲ့ PDF ကိုကွန်ပ PDF files တွေကိုချုံ့ဖို့အစီအစဉ်ကို အဆင့်မြင့် Grapher
အဆင့်မြင့် PDF ကိုကွန်ပ - PDF ကို-document ရဲ့အရွယ်အစားလျှော့ချများအတွက်စုံလင်သောဖြေရှင်းချက်, တဦးတည်းသို့ format တစ်ခုသို့မဟုတ်ဤဖိုင်တွေပေါင်းစပ်သို့ရုပ်ပုံများကို convert ။
ကုန်ကျစရိတ်: $ 49
Size: 11 MB အထိ
ကိုးကွယ်ရာ "လို့ registry ကိုတည်းဖြတ်ခြင်းစနစ်စီမံခန့်ခွဲသူများကတားမြစ်သည်"
အဆိုပါ codes တွေကိုနှင့်အပြုံးပုံ VKontakte ၏တန်ဖိုးကိုလေ့လာပါ
Android နဲ့ PC မှာ iCloud မေးလ်
တိုးချဲ့မှု M4B အသံဖိုင်စာအုပ်များ၏သိုလှောင်မှုအတွက်အထူး created တစ်မူထူးခြားတဲ့ပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်အတူ files Apple ရဲ့ Device များပေါ်တွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့။ Next ကိုကျနော်တို့ပိုပြီးလူကြိုက်များက MP3 format နဲ့နည်းလမ်းများ M4B ပြောင်းလဲခြင်းဆှေးနှေးပါမညျ။ M4B ချုံ့နည်းလမ်းနဲ့နားထောင်၏နည်းလမ်း၏အစိတ်အပိုင်းများအတွက် M4A format နဲ့အတူဘုံ၌များစွာသောရှိသည် extenstion နဲ့ MP3 ကိုအသံဖိုငျမြားမှ M4B သို့ပြောင်းလဲပါ။ ဆက်ဖတ်ရန်
ချိန်ညှိခြင်း Router က TP-Link ကို TL-WR842ND
ကျနော်တို့က MS နှုတ်ကပတ်တော်၌တစ်ဦး crossword ပဟေဠိလုပ်နေတာ